Ogaden News Agency (ONA) – Waraaqo sir ah oo kasoo baxay Safaarada Gumeysiga Ethiopia ee London Iyo Mudaharaaad dhici doona 12 Jan 2013.
Waraaqo sir ah oo kasoo baxay Safaarada Gumeysiga Ethiopia ee London Iyo Mudaharaaad dhici doona 12 Jan 2013.
Xog sir ah oo ka helnay Safaarada Ethiopia ee magaalada London ayaa sheegaysa in ay soo galayaan wadanka UK dadkii ka geystay Xasuuqa dhulka Ogadeniya iyaga oo kusocda wafti uu hoggaaminayo Wasiirka Arrimaha Dibada gumeysiga Ethiopia Tedros Adhanom. Warqadahan sirta ah oo ka kooban 5 warqadood ayaa waxaa kamid ah warqad loo dirayo dadka qurba joogta ah, warqado loo dirayo Xawaaladaha Somalida iyo ganacsatada somaliweyn oo larabo in lagu dhaco lacagtooda iyaga oo hadda ka hor laga dhacay miisaniyad dhaqaale oo aad u badan oo laga arruursaday hadda ka hor.
Jaaliyada Ogadeniya ee Wadanka UK ayaa olole aag ku jirta oo larabo in lagu qabqabto laguna shaaciyo saxaafada wadankan UK dadka la socda gumeysiga ee xasuuqa kasoo geystay dhulka Ogadeniya. Iyada oo ay jiraan dacwado hadda ka hor laga dhigay xubno kamid ah gumeysiga Ethiopia.
Waxaa sidoo kale dhici doona Banaanbax Weyn oo kadhici Doona magaalada London 12 January 2013. Banaanbaxan ayaa ku wajahan guumeysiga ethiopia. waxaaana la ogeysiinaya shacabweynaha Somalida Ogadeniya ee ku dhaqan wadanka UK inay kasoo qeyb galaan banaabaxaas.